Golaha Wasiirada Talyaaniga Oo Ansixiyay Tallaabooyin Kor Loogu Qaadayo Dalxiiska Hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Golaha Wasiirada Talyaaniga Oo Ansixiyay Tallaabooyin Kor Loogu Qaadayo Dalxiiska Hadda
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Wasiirka Dalxiiska ee Talyaaniga, Massimo Garavaglia
Golaha Wasiirrada Talyaaniga ayaa ansixiyay tallaabooyinka Qorshaha Soo-kabashada iyo Soo-kabashada Qaranka kaas oo taageera ganacsiyada dalxiiska ee dalka.
€191.5 bilyan oo kheyraadka ah ayaa loo qoondeeyay iyada oo loo marayo Xarunta Soo-kabashada iyo Adkeysiga.
Qorshahani waa faragelin ujeedadeedu tahay in lagu hagaajiyo burburka dhaqaale iyo bulsho ee uu sababay dhibaatada faafa.
Maalgelinta waxaa ka mid ah maalgelinta 2 waaxood oo muhiim u ah Talyaaniga, kuwaas oo ah dalxiiska iyo dhaqanka, iyada oo la adeegsanayo hab dhijitaal ah oo dib loo bilaabo.
Qorshaha Soo-kabashada iyo Adkeysiga Qaranka (NRRP) ee uu soo bandhigay Talyaanigu wuxuu saadaaliyaa maalgelinta iyo xirmo dib-u-habeyn joogto ah, iyadoo € 191.5 ee kheyraadka loo qoondeeyay Xarunta Soo-kabashada iyo Adkeysiga iyo €30.6 bilyan oo lagu maalgeliyo Sanduuqa Dhameystirka ah ee uu aasaasay Sharciga Talyaanigu. No. 59 ee May 6, 2021, oo ku salaysan kala duwanaanshaha miisaaniyadeed ee sannadaha badan ee ay ansixiyeen Golaha Wasiirrada Talyaanigu Abriil 15.
Qorshaha waxaa lagu sameeyay ilaa 3 goob istaraatiijiyadeed oo lagu wadaago heerka Yurub: digitization iyo ikhtiraacida, kala guurka deegaanka, iyo ka mid noqoshada bulshada. Waa faragelin ujeedadeedu tahay dib u hagaajinta burburka dhaqaale iyo bulsho ee ka dhashay dhibaatooyinka faafa, ka qayb qaadashada wax ka qabashada daciifnimada qaabdhismeedka dhaqaalaha Talyaaniga, iyo in dalka lagu hoggaamiyo dariiqa kala-guurka deegaanka iyo deegaanka waxayna leedahay 6 hawlood oo ay ku jiraan dalxiiska.
“Digitization, Innovation, Competition, Culture” waxa ay qoondaynaysaa wadar dhan 49.2 bilyan oo Yuuro (kuwaaso 40.7 bilyan ka mid ah laga helay xarunta Soo kabashada iyo adkeysiga iyo €8.5 bilyan ee Sanduuqa Dhameystirka ah) iyada oo ujeedadu tahay in kor loo qaado isbeddelka dhijitaalka ah ee dalka, laguna taageerayo hal-abuurka nidaamka wax soo saarka, iyo maalgelinta 2 qaybood oo muhiim ah ee Talyaanigu, oo kala ah dalxiiska iyo dhaqanka; Si kale haddii loo dhigo, hab dhijitaal ah oo loogu talagalay dib u soo celinta dalxiiska iyo dhaqanka.
Madaxweynaha Federalbergi, Ururka qaran ee hoteelada Talyaaniga, Bernabo Bocca, ayaa sheegay in tani ay tahay cirbad muhiim ah oo lagu kalsoonaan karo ganacsatada iyo shaqaalaha, wuxuuna u mahadceliyay Wasiirka Dalxiiska ee Talyaaniga, Massimo Garavaglia, oo aqbalay codsiga Federalbergi. Bocca oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri:
"[Tani] waxay kalsooni muhiim ah u tahay ganacsiyada iyo shaqaalaha dalxiiska. Tallaabooyinka lagu sheegay wareegtada ayaa wax weyn ka taraya dib u bilaabashada, maadaama ay taageerayaan dib u dhiska tas-hiilaadka hoyga, oo ay ku jiraan tabarucaad aan la bixin karin iyo credit credit, oo ay la socdaan bixinta deynta, si loo xaqiijiyo sii wadida ganacsiga ee shirkadaha qaybta dalxiiska iyo dammaanad qaadka baahiyaha iyo maalgashiga.
"Waxaan uga mahadcelineynaa Wasiirka Garavaglia inuu aqbaley codsiyada Federalbergi, isagoo dhaqaajiyey qalab lagu caawinayo shirkadaha inay ka gudbaan marxaladan oo dad badan ay weli adag yihiin, iyo in la sameeyo maalgashiyada lagama maarmaanka ah si ay ula tartamaan tartanka caalamiga ah ee adag."